Apple itsva iPhone 8 nhepfenyuro yakangosvika mumigwagwa uye kambani inoti ine akanakisa makamera akambova parunhare (zvirinani kusvika iyo iPhone X anobuda). Vafudzi veSamsung vanogona kugumbuka, sekutaura kwekambani S8 uye Cherechedza 8 makamera ari, kutaura zvazviri, akanakisa. Ndeupi ari nani kupfuura mumwe? Unofanirwa here kushandura masisitimu anoshanda kuti uwane mifananidzo iri nani kubva kune waunogara uchigara naye? Zvakakosha here kuti utore imwe yeakakura, pricier, maviri-lens mamodheru? Takamhanya nemiedzo yakakura kuti ikubatsire kusarudza.
Spoiler yambiro: Iko hakuna akajeka-akacheka anokunda muhondo iyi. Imwe neimwe ine kusimba uye kushaya simba, asi ese ari maviri ari mhedziso akanakisa kamera nhare iwe unogona kutenga.
iPhone 8: Sensor Nyowani?
Apple inoti iyo iPhone 8 Plus inoshandisa masensa akanyanya kukura pane akautangira. Izvi zvinogona kuve zvechokwadi, asi hazviratidze mune iyo EXIF ​​dhata. Iyo huru kamera ndeye 28mm yakaenzana lens, ine chaiyo yakatarisa kureba kwe 3.99mm uye yakagadzika f / 1.8 kuzarura.
Ndakatarisa iyo x-ray mifananidzo iyo iFixit yakaitwa yeiyo main sensor module muiyo iPhone 7 uye iPhone 8. Iwo akasiyana akasiyana, saka kuenzanisa kwakaringana hakugoneke pasina kumwe kukura. Ndakagadzirisa mifananidzo miviri kuti ifanane zvakanyanya sezvingaite muFotohop, ndichishandisa rondedzero yechassis senongedzo, ndokuzofukidza ma module emagetsi pamusoro peumwe nepamunogona napo. Kuona-uye-mberi kuona kunoratidza kuti, kana paine mutsauko muhukuru, idiki zvakanyanya.
Zvinoenderana nedata reEXIF, iyo huru kamera ye iPhone 8 ichiri 3.99mm f / 1.8, zvakafanana nezvaunopinda iPhone 7, uye ruzivo rwekushambadzira kweApple runotiudza kuti chinhu chematanhatu-dhizaini, zvakare chakafanana neicho 7. Isa lens rimwe chete uye utore nzvimbo imwechete yekutarisa uye zvakajeka, nzvimbo yekufungidzira inoshanda zvakare yakafanana.
Izvo zvakare ichokwadi neiyo 2x lens. Iyo 6mm f / 2.8. Iwe unozoona kuti masvomhu haashande kunze uko kuti ive 2x. Imhaka yekuti sensor yechipiri idiki pane yekutanga. Iyo huru lens inoshandisa chip iri 1/3-inch kirasi (saizi yakafanana Apple yakashandisa kubvira iyo 5s) uye iyo 2x sensor ndeye 1 / 3.6-inch dhizaini.
Samsung inoshandisa iyo 4.3mm f / 1.7 lens yeiyo yakafara-kona kamera pane iyo S8 uye Cherechedzo 8. Iyo yakatarisa kureba yakafara, asi nekuda kwekuti main sensor yekamera yakakura 1 / 2.55-inch dhizaini, iyo nzvimbo yekutarisa yakafara , angangoita 24mm mune yakazara-furemu mazwi. Lens yayo yechipiri inoita kunge yakamhanyisa pane kungoisa digitally kuendesa main lens munzvimbo yayo ye2x. Izvi zvinoita kuti ndifunge kuti iri padyo ne52mm pakureba, izvo zvinoita kuti sensor yayo ive 1 / 3.6-inch dhizaini, yakafanana neyemufananidzo wechipiri weApple. Iyo lens pachayo ndeye 6mm f / 2.4 optic.
Ehe, kamera huru yeSamsoni ine mukana wakakura. Asi mutsauko uripo pakati pe f / 1.8 na f / 1.7 ndewekudzidza. Musiyano we f-anomira pakati pe 2x lenzi haukoshese, asi wave padyo. Wechitatu-wechitatu-mira musiyano unoreva kuti iwe uchatora kuburitswa kune imwechete ISO pa 1/30-yechipiri ne iPhone uye 1/40-yechipiri neChinyorwa 8. Mukana chaiwo iyo Cherechedzo 8 inobata ndeyekuti lens yechipiri yakanyatsogadzikana, nepo 8 Plus isiri-iwe uchafanirwa kukwira kuenda kune iri kuuya iPhone X kuti uwane malenzi maviri akasimbiswa.
Isu tinomhanya yakajairika iratidziro yemabara bvunzo pane ese kamera isu tinoyedza, kubva kumakomputa kusvika iyo yepakati fomati mamodheru. Iko kune bvunzo chati yekuongorora ruzha rwemufananidzo, uyezve tarisa maitiro ekuderedza ruzha mhedzisiro, pamwe neyakajairika kusiyanisa-yakagadziriswa resolution chati kuti uone kuti yakasviba sei lens.
Smartphone makamera akati siyanei pane SLRs, kwete chete nekuda kwemalensi madiki nema sensors, asi zvakare nekuti yakawanda yevoodoo inopinda mukugona kwavo kugadzira pikicha yakavakirwa pasoftware. Uyezve, nekuti iwe (pamwe) unenge uchitumira yako yazvino snapshot ku Instagram, Facebook, Snapchat, kana zvimwe zvakadaro, mafirita emifananidzo anowanikwa zvirinani uye anoshandiswa kumifananidzo kuti uvape akasiyana maitiro.
Saka tora bvunzo bvunzo yezvavari: yakachena sezvo isu tichigona kubata tarisa pane iyo kamera yekukasira kubuda. Ivo havasi ivo-vese, magumo-ese akaunganidzwa ezvakanaka nezvakaipa, kunyanya kana iwe uchifunga kuti foni yako kamera app ingori nhanho yekutanga murwendo rurefu iyo mifananidzo yako ichafamba pamberi pavo vasati inoonekwa neshamwari, mhuri, uye vateveri.
Isu takasarudza kuenzanisa iyo iPhone 8 Plus neiyo Galaxy Note 8 nekuda kwezvikonzero zvakati. Imwe, ruoko rumwe nerumwe runogovana hunyanzvi hwakawanda nehama yayo diki. Vaviri, ivo vaviri vane mbiri-kamera kumisikidzwa, saka vanogona kuita chinhu senge kutora mifananidzo ine rakapusa kumashure uye zvakare kupfura mafoto aine akajairika-angle munda wekutarisa.
Kana iwe uri fan yefoni diki, uye uri kuyedza kuita sarudzo pakati pe iPhone 8 kana Galaxy S8, unogona kungorega iyo bvunzo mifananidzo uye dhata kubva ku2x kamera uye wotarisa izvo izvo imwe-lens modhi inogona kuita.
Kuyedza iyo iPhone isu takashandisa iyo ProCam 5 app, iyo $ 5 kurodha iyo inotsigira izere bhuku revhavha uye ISO kutonga, pamwe neRaw mufananidzo kutora. Ndiyo chete nzira yaungave nechokwadi kuti uri kushandisa iyo 2x lens paunoda - iyo yakajairika kamera app inoshandura kune iyo digitally zoomed maonero eakafara lens muchiedza chisina.
Apple yakaisa rutsigiro rweRaw mune nharembozha dzichangoburwa, asi haichitsigire neayo software. Cherechedzo 8 inopfura muRaw kana iwe ukashandisa iyo Pro modhi mune yayo yakajairwa kamera kamera, asi haugone kushandisa iyo 2x lens - inoshanda chete muAuto mode. Uye, senge iyo iPhone, kana iwe uri kushandisa yayo app mune auto mode unozopedzisira uine digitally zoomed kupfura pa2x mune kudzima mwenje.
Iyo iPhone 8 ine base base yekumisikidza ye 20. Kana uchipfura muPro modhi, yakaderera iwe yaunogona kumisikidza Cherechedzo 8 iIO 50. Pane musiyano mudiki (kana uripo) musiyano pakati peIO 20 neIO 50 pane iyo iPhone, saka isu ndichatanga kuenzanisa kwepfuti paIO 50. Marongero ese ari maviri ari kuzoshandiswa muchiedza chakajeka, chekunze.
Cherechedzo 8 inoratidza zvishoma kupesana uye kuzadza kwemavara pane iyo iPhone 8 painopfura maJPG. Kutarisa paRaw mafaera kunoratidza kuti iyo Inotakurisa huru sensor iri kutora zvishoma zvishoma zvishoma yakajeka, inoonekwa mumashizha pasi peiro. Munyika chaiye, mutsauko usingakoshesi. Iyo yekuwedzera kurodza inounzwa neiyo Samsung JPG injini inonunura yakakwidziridza yakakwenya kupinza mamaki (3,025 mitsara) pane iyo huru kamera ye iPhone (2,851 mitsara) Asi kana iwe ukafunga kuti ese ari kuburitsa maMPMP mafaira akagadzirirwa masocial network, mutsauko ndewechikoro.
PaIO 100, mutsauko uripo pakati peiyo iPhone 8 uye Cherechedzo 8 makamera makuru haana basa. Mifananidzo yakasvibirira iri padhuze futi, iine iPhone ichiratidza zvishoma zvishoma kana ichigadziriswa muLightroom CC ine default magadzirirwo akaiswa.
Iyo iPhone 8's JPG inoburitsa inoratidza zvishoma zvishoma zvakadzama paIO 200 kana ichienzaniswa neChiziviso 8. Lightroom inoita basa ririnani kubvisa ruzha rwemavara kubva kuCherechedzo 8's DNG kuburitsa, asi zvikasadaro zvinobuda zviri padyo chaizvo.
PaIO 400 zvinobuda zvinoramba zviri pedyo pakati pemafoni maviri aya. Chinyorwa chinoratidza kumucheto kwakadzika zvakadzama, uye ruzha rudiki (1.1 muzana) maringe neiyo huru kamera yeiyo iPhone (1.2 muzana). Zvekare, iyo iPhone inoratidza yakawanda ruzha rwemavara mune yayo DNG kuburitsa, asi isu tinotarisira kuti Adobe igadzirise yayo yekugadzirisa injini kuti ibvise iyo mune ramangwana. Kunze kwerudzi rwenhema, Raw mufananidzo mhando mutsipa nemutsipa.
ISO 800 ndiyo yepamusoro yekumisikidza manyorerwo inotsigirwa neCherechedzo 8 kamera kamera. Yayo JPG kuburitsa inoratidza zvishoma zvishoma zvakadzama kupfuura iyo huru iPhone kamera, asi ese ari maviri akasviba. Lightroom inobvisa ruzha rwemavara kubva kuCherechedzo raRaw yakabuda zvinobudirira, uye nepo iri yegiriniti inochengetedza ruzivo rwusina kuonekwa muJPG. Ruzha rweruzha mune iyo iPhone kuburitsa inopukuta huwandu hwakanaka hwehuwandu. Tichafanirwa kumirira kuti tione kuti Adobe ingavandudza zvakadii kugadziriswa kwayo kana ichiwedzera chimiro chefoni nyowani kuLightroom.
Iyo iPhone inogona kuiswa manyore kuIO 1600 uye 2000. kubva pane diki sensor pane yakakwira ISO.
Samsung haikupe chero kugona kushandisa iyo 2x kamera kana uchipfura muPro modhi, zvinoreva kuti haugone kupfura Raw uchishandisa iyo 2x lens. Zooming inoshanda zoom yedhijitari, inova iyo chaiyo musoro-wekukwasva Inoshandisawo zoom yedhijitari mune otomatiki modhi kana mwenje wakadzika zvakakwana kusundira iyo 2x kamera kupfuura ISO 200. Apple inoita chinhu chimwe chete mune yayo yakajairwa kamera app, kunyangwe iine chikumbaridzo chepamusoro, ichichinjira kune yekutanga kamera kuIO 800. Izvi zvaivewo zvakadaro neiyo iPhone 7 Plus.
KuIO 50 iyo Inoti 8's 2x lens ine inoonekwa pamupendero mukugadziriswa kana ichienzaniswa neiyo iPhone 8 Plus. Ndiri kuona humwe humbowo hwekushusha zvine hukasha, asi hazvisi zvinotyisa. Mhedzisiro yeCrisper inoshandura kuita yepamusoro yeImatest sharpness mamaki zvakare, 3,655 mitsara yeChiziviso maringe 2,518 mitsara yeiyo iPhone.
Mifananidzo kuburitsa iri padhuze zvakanyanya kutenderedza ISO 100. Cherechedzo 8 inoratidza zvishoma zvishoma, nepo iyo iPhone ichiburitsa mufananidzo wakasviba zvishoma nekumwe kusiyanisa. Iyo noti ichiri nemupendero, asi haisi hombe.
Iyo iPhone kuburitsa inotora rova ​​paIO 200. Cherechedzo 8 inoita zvishoma zvirinani, iine yakajeka yakajeka yakajeka inoonekwa, asi zvakare, iwe uchafanirwa kutarisa mapikicha padanho re pixel kuti uone chaizvo mutsauko.
Yekucherechedzwa 8's 2x kamera inodonha kubva mujaho kuIO 400. Isu tinoona yakawedzera ruzha neiyo iPhone 8 Plus pano, ichiwedzera kuburitsa kuburitsa, asi zvichiri nani pane izvo iwe zvaungawana nejodhi zoom yakashandiswa kune iyo ISO 200 mufananidzo kubva iyo 28mm lens-yeuka kuti yechipiri lens haina kuunganidza mwenje wakawanda sewekutanga.
Iwe unozofanirwa kushandisa yechitatu-bato app kupfura neiyo 2x lens kuIO 800 pane iyo iPhone. Tsananguro inopukutwa, kunyangwe paine zvimwe zvinowedzera kune yayo Raw kugadzira foni, ini ndinotarisira kuti iwe unogona kuwana zvishoma zvirinani mhedzisiro kubva mukugadzirisa iyo DNG.
Iyo nyaya iri yakafanana neiyo ISO 1250, iyo yepamusoro mamiriro ayo iyo iPhone's 2x lens inogona kushandiswa. Ruzivo rwakanaka rwakasviba, saka tarisira kuti machira angave akapfava kana uchipfura maJPG. Ruzha roruvara inyaya hombe nenyaya yazvino Raw kutendeuka.
Takamhanya batch rakafanana remiedzo gore rapera uchishandisa iyo iPhone 7 Plus, iPhone 6s, uye Galaxy S7. Isu tanga tisingashandise bhuku rekamera kamera yeiyo 7 Plus panguva iyoyo, asi zvinoita sekunge paine kumwe kuvandudzika kudiki mune yakakwira ISO mhando yemhando neiyo nyowani iPhone 8 modhi. Yakawanda sei iyi iri Hardware uye yakawanda sei yekugadzirisa mifananidzo iri mubvunzo. Kushambadzira kweApple kuchaita kuti iwe utende kuti husiku nemasikati; hazvisi. Kana iwe uine yako 7, kana kunyangwe ma6, iko kuvandudzwa mukuita kwekufungidzira mashandiro ari marginal. Iyo iPhone 8 idanho rakakura kuenda kumberi kana iwe uchiri kushandisa iyo iPhone 6, uye kana ukasarudza iyo Yekuwedzera modhi, iyo mbiri kamera inobatsira kubva kune chero imwechete-lens foni.
Iyo Inoti 8 uye S8'kamera huru ndeye kusimudzira kwakakura pamusoro pemufananidzo unowanikwa muGPS S7. Panzvimbo dzepazasi tinoona mafoto asina kunyanyosimbiswa zvakanyanya, uye kumaIOs epamusoro tinoona kushomeka kweruzha kunoiswa kumaJPG. Kukunda-kuhwina kweSamsung pamberi uko.
Iyo iPhone 8 uye 8 Plus inogona kusevha mifananidzo mune maviri mafomati- HEIC kana JPG. Isu takapfura zvese tichishandisa HEIC, asi foni inoshandura iyo mifananidzo kuJPG painotamisa kuburikidza neAirDrop, Dropbox, kana email. Sezvo HEIC isingatsigirwe pamashandisi edesktop atinoshandisa kuongorora mifananidzo, takatarisa shanduko dzeJPG. Kubatsira kukuru kweHEIC kunonyanya kushanda, kumanikidza mufananidzo kumanikidza. Ndakatarisawo pamuedzo mifananidzo pane iyo iPhone skrini uye ndikazvienzanisa nezvandaiona pane yangu desktop desktop. Ini handina kukwanisa kuona mutsauko.
Lab miedzo yakakura kana iwe uchida kutarisa bvunzo mifananidzo uye nhamba. Ivo vanobatsira kuti vakuudze mashandiro anoita chimwe chinhu, uye chii chiri kusimba uye kushaya simba kuri, uye mune zvakanyanyisa mamiriro, zvishoma zvekuwedzera kuita zvinogona kukubatsira iwe kuti utore mufananidzo waungangodaro neimwe nzira.
Muchiedza chakajeka, haufanire kutarisira kuona mutsauko wakakura pakati peiyo iPhone 8, Galaxy S8, kana Cherechedzo 8. Asi nepo Chinyorwa 8 chikaguma kuratidza zvishoma zvakadzama kumaIOs epamusoro mumayedzo edu erabhoritari, ndakasuwa kuona mabatiro aaiita kupfura chaiko chiitiko mumugwagwa weguta husiku. Iyo huru kamera ye iPhone (kuruboshwe) inoita basa riri nani kudhonza mune zvakaratidzwa mune yakajeka signage, uye nepo marambi emumigwagwa achiburitswa kunze, iwo haaratidze iwo iwo iwo marasha emoto sezvaunowana neiyo Note 8's main kamera. Ose ari maviri akapfurwa nekuratidzwa otomatiki. Samsung ine yakajairwa tsika yekunyanyisa kuratidza chiitiko zvishoma, izvo zvinopa mifananidzo yakajeka kupenya nekutadza.
Isu tinoona iyo yakafanana mhando yemoto kubva kuCherechedzo mune imwe divi-ne-padivi bvunzo kupfura, pazasi. Zvekare, iyo iPhone iri kuruboshwe uye Chinyorwa kurudyi. Zvakare isu tinofanirwa kurangarira kupenya kwakaita lenzi huru; iyo iPhone iri kushandisa ISO 100 kune ese ari maviri mapfuti, nepo iyo Samsung inoshandisa ISO 400 yekutanga uye ISO 200 yechipiri. Kana iwe uri mhando yemufoni wemifananidzo uyo anoshandisa manyorerwo emawoko, unogona kushanda kuti uve nechokwadi chekuti nguva yemigwagwa yehusiku haina kupenya nekugadzirisa kuburitswa nemaoko, asi isu tinotarisira kuti ruzhinji rwevateereri vemafoni vanovimba nekuratidzwa otomatiki. .
Ose ari maviri maapplication kamera anorega iwe uchinje kujekesa usinga fanirwe kuongorora mune echinyakare marongero. Tinya kuti utarise pane iyo iPhone uye pane yekutsvedza inotsvedza kurudyi kwebhokisi rinotarisa. Ita zvakafanana paCherechedzo uye iri pazasi pefuremu yako. Iwe uchazoda kudzidza kudzishandisa kudhara mukupenya kuti uwane zvakanyanyisa kubva pane yako smartphone kamera. Iwe unogona kushandura iyo inofinha, inopenya yakajeka pfuti mune chimwe chinhu chinosemesa uye mumvuri nekudzikisira kusvibiswa, uye uwane zvirinani kupfura kwezvidzidzo zviri mumumvuri zvine simba backlight nekushandisa iyo inotsvedza kujekesa mufananidzo wako.
Iyo iPhone neGPS zvese zvinotarisa zvakanyanya nekukurumidza, uye main lens inosimbiswa pane ese maviri mamodheru. Iyo yechipiri lens yeChinyorwa yakasimbiswa, asi iyo iPhone 8 Plus's 2x optic haina. Kana iwe uchifunga kuti unenge uchizoshandisa zvakanyanya, kunyanya kune vhidhiyo, uye uri mushandisi weIOS, funga kumirira iyo iPhone X, iyo ine mbiri dzakadzikama lenses kumashure.
Ese ari maviri iPhone uye Samsung mureza mamodhi anorekodha vhidhiyo pa4K mhando. Asi iyo iPhone inoita kuti iwe usarudze iyo furemu rate-24, 30, uye 60fps kutora sarudzo zviripo. Iyo Galaxy S8 uye Cherechedzo S8 yakavharirwa mukati kupfura pa30fps pa4K, asi inogona kusundira ku60fps pa1080p. (Iyo iPhone inogona kuzviita futi.) Kuchinja marongero evhidhiyo neCherechedzo 8 iwe unoshandisa kamera kamera, zvine musoro. Kuti uchinje resolution kana furemu rate neiyo iPhone, iwe unofanirwa kukwira mukati meako makuru Zvirongwa app uye uwane iyo kamera kamera. Zviri kuvhiringidza uye hazvibvumiri iwe kusiyanisa kutaridzika kwevhidhiyo yako nekureruka kwandingafarire.
Izvo zvinoita kuti iyo iPhone iwedzere kuve inochinjika kune vanhu vanofarira iwo akasiyana maitiro anotaridzika iwo vhidhiyo furemu rate inogona kuita. Unogona kupfura pa24fps kuti utarise cinematic, pa30fps kuti uenzane neyechivanhu vhidhiyo, uye 60fps yeiyo Ultra-inotsvedza-yekukurumidza-chiito kutaridzika. Uye nekuti inoita zvese zvitatu pa4K, iwe une nzvimbo yakasununguka yekudyara kusvika ku1080p kuti uwane yakasimba tambo yekuona uchichengetedza kudzikama. Iyo iPhone zvakare inotsigira 1080p inononoka-inofamba mifananidzo, yakatorwa pa120fps kana 240fps kwekota imwe kana imwe-yechishanu kumhanya kumhanya, chimwe chinhu icho Cherechedzo 8 uye Galaxy S8 hazviite.
Iyo iPhone 8's wide-angle kamera ine yakanyanya kugadzikana yeboka. Vhidhiyo yakanyatsogadziridzwa, saka hapana jitter, uye inotaridzika chaizvo zvakasikwa-zvese pa4K. Cherechedzo 8 ine malenzi maviri akagadzika, uye nepo iwo asingasvetuke uye jittery, unogona kuona furemu kuzunza iwe paunotora nhanho uchifamba, mhedzisiro isipo mu8 Plus 'yakafara kamera. Iyo 8 Plus iri kunyatso kushandisa kumwe kudzikamiswa kwedigital kudzikamisa yayo 2x lens footage saka haisi jittery, asi haina kunyorovera senge chero yeanosarudzika sarudzo, uye iwe unogona kuona kumwe kusiri kusiri kwemhedzisiro iyo mhedzisiro yedigital kudzikama.
Pamusoro peyakajairwa vhidhiyo kubatwa, iyo iPhone inozo-gadziridza mavhidhiyo pane zvinodiwa, ichiratidza mifananidzo uye nenguva kubva kune imwe nguva nguva. Ndakaiyedza. Yakaita dzimwe sarudzo dzakashamisa. Iyo yakasanganisa mashoma mashoma emifananidzo yevashandi vane yakawanda mifananidzo kubva kune yedu kamera bvunzo chiitiko, uye yakasiya zvese zvandakapfura mumabotani minda. Ini ndinofungidzira inoda vanhu uye kuyedza machati kupfuura maruva. Kana iwe ukashandisa foni yako kutora mamwe akajairwa mafoto, ichave netarisiro yekuita basa riri nani.
Iyo iPhone zvakare inodurura izvo Apple zvinodaidza Live Mifananidzo. Iwo musanganiswa wechipiri kana kuti yevhidhiyo inotungamira kune yako bara, inoteverwa nemufananidzo iwoyo. Iyo yakachena pfungwa - Nikon akaita zvimwechetezvo neakakundikana akateedzana eNikon 1 isina girazi makamera. Asi kana iwe ukasazviona pachako uchigovana idzi mhando dze clip iwe ungangoda kudzima iyo ficha, sezvo ichitora yakawanda nzvimbo kupfuura yakajairwa foto.
Dual Lens Zvimiro
Kana iwe uri kutenga ye iPhone 8 kana Galaxy S8, unogona kusaremekedza chikamu ichi. Tichataura nezve izvo zviviri malenzi ari mu8 Plus uye Cherechedzo 8 zvinounza patafura. Pamusoro penzvimbo yakasimba yekutarisa kana vachipfura mifananidzo, ivo vaviri vanoshandisa ruzivo rwakadzama runounzwa nemakamera kuisa mepu uye kutevedzera iyo yekunze-kwekutarisa kuburitsa, inozivikanwawo se bokeh, inosanganisirwa nemalenzi ekuvhura akazara uye makuru maseru sensors.
Vanozviita zvakatosiyana. Apple hairegi iwe uchinje huwandu hweshure blur, nepo Samsung ichidaro, asi varidzi ve iPhone 8 Plus vane mwenje mwenje mhedzisiro inogona kuiswa kumifananidzo, nepo iwe usingawane izvozvo neNotere 8.
Pane iyo iPhone inonzi Portrait Mode, kunyangwe ichishanda kana wakabata foni mukutarisa kwenzvimbo uye iwe zvechokwadi hauganhurwe nekutora mifananidzo vanhu. Samsung inodaidza yayo vhezheni Live Focus. Ose ari maviri anoda kuti iwe uve tsoka shoma kubva pachidzidzo chako kuenda kubasa, uye ese ari maviri anotendera gadziridzo kumufananidzo uye mhedzisiro mushure mekubatwa-funga nezvayo se Lytro kamera, asi iine mhando yemhando iri nani.
Kune yangu yekutanga batch yekuyedza kupfura ini ndaida kutora mifananidzo yemunhu, uye PCMag inoratidzira guru Chandra Steele akazvipira. Ndakaita zvese zvandaigona kuti ndifananidze kuronga uye kuvhenekera nemafoni ese ari maviri, pamwe ne Canon EOS 5DS R pamwe neazvino Tamron 24-70mm f / 2.8 zoom lens yakasungirirwa. Iyo SLR kupfura yakaguma yave pa66mm pa f / 2.8. Mhedzisiro iri pamusoro. Iwe unozoona kuti mapfuti haana kunyorwa. Ona kana iwe uchigona kutaura mutsauko pakati pemafoni uye pro SLR.
Kumhanya kubva kuruboshwe kurudyi, isu tina iyo Note 8, iyo Canon, uye pakupedzisira iyo iPhone. Kunyangwe riri zuva rine mhepo, Chiziviso 8 chakakwanisa kusaita chero chinhu chinotyisa kune bvudzi raChandra mukudzika-mepu maitiro uye kununura, kune rangu ziso, kutaridzika kwakanyanya kufanana nepro SLR uye f / 2.8 zoom lens. Kutuka kwehuni kuseri kwenyaya yedu hakuna kuita sekusanzwisisika muGirazi kupfura, asi chivakwa chiri kumashure chakasviba neaplomb. Iyo ndima yekutarisa yakati siyanei zvishoma neCherechedzo 8, kunyangwe iwo matatu mapfuti ari kutorwa kubva panzvimbo imwechete aine yakafanana pozi. Imhaka yekuti yakakosha Kamera kamera iri padiki padiki pane iyo iPhone.
Iyo iPhone haina kuita basa rakanaka nebvudzi raChandra. Musoro wemusoro wake wakatemwa zvishoma, uye pane kucheka kunoonekwa pane iyo kamera kuruboshwe kwemusoro wake. Sei? Kunyatso tarisa iyo mifananidzo (pazasi) inotaurira iyo ngano. Iyo algorithm yeiyo iPhone iri kukandirwa kure neebvudzi rakasarudzika kumusoro kwemusoro, pamwe nediki rechivakwa chiri kuseri kwaChandra chisina kuvhenekerwa zvizere nekuvira kwezuva. Mufananidzo kuruboshwe kuruboshwe ndiyo isiri-pikicha iPhone yakapfura (unogona kushandura zvinoitika mushure mekunge mufananidzo watorwa), iine iyo iPhone's Natural Light portrait yakapfurwa nepakati, uye, kuenzanisa, iyo Note 8 inotora pamufananidzo kurudyi.
Izvo hazvireve kuti Samsung algorithm yakakwana; inogona kunyengedzwa kumusoro. Asi panguva yekudhinda, zvinoita sekunge ine kumberi kwepamusoro kana zvasvika pakuronga vanhu. Iniwo ndakatora mafoni ese kubrunch, ndichiteverwa nerwendo kuenda kuNew York Botanical Gardens, kunoona mabhureki emabatirwo avo akabata nyaya mbiri dzinozivikanwa dze Instagram - chikafu nemaruva.
Kana zvasvika pamazai benedict, mafoni ese ari maviri anoita rinoyemurika, rakakodzera Instagram basa. Iyo iPhone inoburitsa zvishoma mumumvuri mwenje, asi icho chinhu chaunogona kugadzirisa zviri nyore mushure mechokwadi, haina kunyanya kusviba. Iyo inobata iyi kumashure mushe, iine nyoro, ine minhenga blur, uye ini handione chero matambudziko nekumisikidzwa kwenyaya yacho pachayo. Cherechedzo 8 haiburitse kwakanyanya blur, kunyangwe pakanyanya kunyanyisa, asi kunze-kwe-kwekutarisa kwakanyanya kunaka, ivo havana chete iwo iwo manhenga anotaridzika sezvaunowana neiyo iPhone.
Kumagadheni ndakabatisa pfuti nefoni dzese dzaigona kupusisa veteran vatori vemifananidzo pa Instagram. Vaviri vakaita basa rakanakira mepu ye lotus yaive chikamu chekunze kwemvura gadheni inoratidzira. Asi pakasvika kupfura shiri-ye-paradhiso, iyo iPhone yakakwanisa kuwana yakaenzana huwandu hweshure blur, nepo Chiziviso 8 ichitaridza zvakanyanyisa mukutarisa kuseri kweruva, kunyangwe iine blur yakaiswa padanho repamusoro.
Ndiri kufunga iyo yakafara-yakakura-enguru lens iri mukutamba pano. Kune uyu mufananidzo chaiwo, wakapfurwa mukati mepasi pematenga ekudenga, mavara eSamsung anodziya uye anofadza ziso, asi zvakare, zviri nyore kudziisa pikicha kuravira, kungave kushandisa iyo iOS Mifananidzo app kana software yekugadzirisa yesarudzo yako.
Nhare dzese dziri mbiri dzakatadza nguva hombe pakasvika pakubata fwiriri fiddlehead fern chirimwa. Chiziviso 8 chakanetseka kuita mepu uye ini ndakangokwanisa mashoma mashoma asina kujeka aive ekuedza kwekamera pakusvibisa kumashure (iyo yakafara-kona pfuti, iyo Inocherechedzwa 8 inochengetedzawo, yakatariswa zvakanyanya). Iyo iPhone yakanhonga pane zvimwe zvikamu zvemuti, asi yakaita basa rakashata rekusarudza izvo zvinofanirwa kunge zviri mukutarisa uye chii chakakanganisika.
Parizvino, ese mafoni ane plusses uye minuses kana zvasvika kune bokeh simulation. Iyo iPhone 8 Plus dzimwe nguva inonetsekana nemepu bvudzi kana ichipfura vanhu, nepo Chiziviso 8 ichikwira uye ichiita basa rakasimba. Asi kune mamwe mapfuti, kunyanya ayo kana iko kumashure kusiri kure kure, iyo iPhone inokwevera iyo yekunze-yekutarisa nzvimbo ine blurrier, inofadza kupfuura minhenga kutaridzika. Ose ari maviri anotadza fiddlehead fern bvunzo, asi ngatitaurei chokwadi, chirimwa chakaita kunge chisina kujairika. Nekuti iyo portrait mhedzisiro inotsamira zvakanyanya pakushandiswa kwesoftware, pane mukana wakanaka wekuti tizoona kuvandudzwa mumisasa miviri semapurogiramu esoftware anobuda kubva kuApple uye Samsung.
Rangarira kuti nemafoni ese ari maviri, kupfura kudzika kwakadzika kwemunda haisi iyo nzira yakajeka. Zvinotora nguva yakareba kuti utarise uye kuisa mepu pane zvainoita necheni imwe chete, saka kana iwe uchida kutora mapikicha emwana wako mudiki anomhanya achitenderera senge akapfurwa nekamera-huru kamera, iwe uchatoda kutora kamera ine sensor huru. Kunongedza-uye-kupfura ne 1-inch sensors, senge Sony RX100 III, ita izvi mushe uye zvinokwana muhomwe yako, uye kune hupfumi hwesarudzo mune isina girazi uye SLR yenyika kana iwe uchida kuitirana neyakakura inochinjika lens yemhando.
iPhone-Chete: Portrait Mwenje
Ngatitaurei nezve iyo marquee yekuwedzera kune iyo iPhone's portrait modhi, isipo zvachose kubva kudivi reSamsung reruzhowa. Portrait Mwenje, ichiri mubeta, yakasarudzika kune iyo iPhone 8 Plus panguva ino, kunyange ichizowanikwa mune iri kuuya iPhone X. Chishandiso ichi chinowedzera chimwe chipenga kune yako portrait shots, zvichikubvumidza iwe kuti uchinje mwenje pane yako chidzidzo kumeso, kana kuvhenekera ivo vachitarisana nechitema kumashure, iyo yekupedzisira ine tuned modes dzeruvara kana dema-uye-chena kutora mifananidzo.
Iyo yekumisikidza marongero, Natural, ndizvo zvatakamboona mu7 Plus. Iyo yakavandudzwa A11 processor mune nyowani iPhone mamodheru inowedzera mimwe mitsva yekuvhenekera mhedzisiro. Iwe zvakare unowana Studio Chiedza, icho chinovimbisa kuchengetedza yako yemusoro wechiso yakajeka, uye Contour Chiedza, iyo inovimbisa kuendesa mifananidzo ine mimvuri, zvakakosha, uye mwenje wakaderera. Ndakaona maitirwo aya kunge akanyatsosiyana akasiyana; asi kana ukanyatso tarisa unogona kuona zviri kuitwa neumwe neumwe. Iyo iPhone inotibvumira kuti tigadzire kutaridzika kwakawanda kubva kune imwechete pfuti, saka ini ndakatora mufananidzo mumwe waChandra ndikashandisa yega mwenje mhedzisiro.
Maitiro echisikigo anotaridzika kunge akanaka kutanga, asi bara rakatorwa sezvo zuva rakanga rakadzikira pakona, saka mwenje waive munyoro kutanga. Kune mimvuri yakasarudzika inooneka, zvakadaro, kunyanya panogadzirwa kumeso nemvere.
Kuchinjira kuStudio kunotaridzika kunovhenekera iyo mimvuri, kupenda ese maviri emamodheru maziso edu zvakajeka. Zvinoita sekunge ndaive nemubatsiri akamira padhuze neni akabata chiyeuchidzo chekuvhenekera zvirinani.
Iko kutaridzika kweContour kwakaswedera padhuze ne Natural pano. Pachine mumwe mumvuri paziso pasi pebvudzi, asi wakasimudzwa zvishoma. Ganda rinoratidzika kunge rakapfava zvishoma, uye chakasimbiswa pamhino chakajeka kupfuura zvazviri nechitarisiko chaicho. Nechiedza chakawedzera kuti nditange, ndinofungidzira kuti zvaizoitika zvaizonyanya kutaurwa.
Chiedza cheStage, mune ese maviri mavara uye monochrome mafomu, anokurumidza kuoneka. Nhoroondo yacho yaenda, pamwe chete nedzimwe bvudzi raChandra uye ruffles pamapfudzi ehembe yake, zvinosuruvarisa. Mimvuri inokwidziridzwa, senge muStudio, uye tinowana kupenya kudiki mune zvakasarudzika, sezvaungatarisira kubva kuContour.
Kana Apple ichikwanisa kuvandudza nzira dzayo dzemepu kuti dzibudise zvinowirirana kunze-kwe-kwekutarisa mhedzisiro, ine chimwe chinhu pano nemwenje wemwenje. Zviri nyore kufa kuchinja pakati pechitarisiko, kunyangwe mushure mekunge watora pfuti, kuti utore chaunoda, uye mushure meizvozvo unogona kugadzirisa zvimwe uchishandisa chaunofarira app.
Kana iwe uri mumwe we (zvinoita) vashoma vanhu vari agnostic kana zvasvika pakuda pakati peApple neIOS, uye urikusarudza foni yako zvichibva pakushanda kwekamera uye kugona, iwe uchazoda kudzikisira kutsvaga kwako kune imwe ye maviri-kamera mamodheru. Ivo vanokupa iwe kuita kwakasiyana-siyana kana uchitora mifananidzo, sezvo kudzika kwakadzika kwemasarudzo emumunda kunounza kutaridzika kwaunoshamwaridzana nekamera yakakura kwazvo, yakatsaurirwa.
Iyo iPhone 8 Plus ine simba rayo-kwayo autoexposition inowanzo kuve iri nani, kunyanya mukuvhenganisa mwenje, uye iyo isu hatina kuona chero kupenga kwakanyanyisa kutenderedza mwenje inopenya kana tichipfura zviitiko zvehusiku sezvatakaita neChiratidzo 8. Iyo zvakare inofarira kuendesa mapikicha ane kudzika kwakadzika kwemunda, anopa mamwe mafuremu rate sarudzo ye4K vhidhiyo, uye anopfura inononoka-kufamba 1080p vhidhiyo.
Cherechedzo 8 inoita basa riri nani nemifananidzo yevanhu, uye inoramba iine iPhone yezvimwe zvidzidzo. Pandakaedza iwo maviri parutivi, ivo vakamhanyira mumatambudziko akafanana nenyaya dzinonyengera. Iyo Yekucherechedza kamera yechipiri kamera yakanyatsogadzika, saka vhidhiyo yakapfurwa nayo yakanyarara, izvo zvisiri izvo neiyo iPhone 8 Plus. Asi iyo iPhone's wide-angle kamera inopa kudzikama zvirinani pane Samsung.
Kana iwe usiri kuda hombe foni, uye iwe usiri kuda kumirira kana kushandisa mari yeiyo X X (iyo inovimbisa kuendesa seyakanaka kana iri nani kuita kwese kuita kupfuura iyo 8 Plus), iwe ungangove uri kutenga iyo iPhone 8 kana Galaxy S8, ese ari maviri anoshandisa imwecheteyo huru kamera sehama dzavo hombe.
Iyo huru S8 kamera inoendesa mafoto ayo akati wandei zvishoma mukona, kunyangwe dzimwe nguva ichinyanya-kupinza kana ichipfura maJPG. Izvi zvinoreva kuti mapikicha akapfurwa pazasi ISOs anoratidza zvishoma pop kupfuura iwe yaunowana kubva ku iPhone 8, asi sezvo kunzwisisika kunokwidza mafoni maviri kunounza zvimwe zvakafanana mhedzisiro. Izvo hazvisi kusvika ISO 800 kuti Cherechedzo 8 inoratidza mukana mushoma.
Chokwadi, izvo zvaunowana kubva kune iPhone 8 uye S8 main lenses, kubva kuchiri-kutora maonero, zviri padyo padyo zvekuti zvinofanirwa kudzika kune iyo imwe foni inoratidzira iwe yaunoda zviri nani, uye ndeipi inoshandisa chikuva chaunofarira. Kana iwe uchida zvakanyanya zviri nani mifananidzo, mira kupfura nefoni yako uye utenge kamera. Compact mamodheru ane 1-inch sensors anomhanya akatenderedza yakatenderedza smartphone mune yakachena mufananidzo mhando, uye kana iwe uchifunga kuti iwe unoshandisa yakakura kamera nekugara, unogona kusarudza isina girazi modhi or SLR ine lenzi dzinochinjika.